Jenezy 37: 3-4,12-13a,17b-28, - Ny Baiboly
Jenezy toko 37, 3-4,12-13a,17b-28,
<3Tian'Israely mihoatra noho ny zanany rehetra Josefa, fa zanaky ny fahanterany, ka nanaovany akanjo lava. 4Nony hitan'ireo rahalahiny, fa tian-drainy mihoatra noho izy rehetra Josefa, dia nankahalainy izy, ka tsy zakany intsony ny hiteny aminy amim-pitiavana.
12Nandeha niandry ny biby fiompin-drainy tany Sikema ireo rahalahin'i Josefa. 13Ka hoy Israely tamin'i Josefa: Moa tsy miandry ny biby fiompy any Sikema va ny rahalahinao? Ka avia hianao hirahiko ho any amin'izy ireo. Dia hoy ny navaliny: Inty aho. 17Ka hoy ralehilahy: Efa nifindra niala teto izy, fa reko niresaka hoe: Andeha isika ho any Dotaïna. Dia lasa Josefa nanaraka ny rahalahiny, ka nahita azy tany Dotaïna.
25Ary dia nipetraka nihinana izy ireo. Nony natopiny ny masony, dia hitany fa indreny misy Ismaelita niray dia avy any Galaada; ary ny entana nentin'ny ramevany dia astragala, ditin-kazo manitra, mbamin'ny ladanoma, ndeha havariny any Ejipta. 26Ka hoy Jodà tamin'ireo rahalahiny: Inona no soa azontsika raha mamono ny rahalahintsika sy manafina ny rany isika? 27Andeha hamidintsika amin'ny Ismaelita izy, fa aza maninji-tànana aminy isika, fa rahalahintsika sy nofontsika izy. Dia nihaino azy ireo rahalahiny. 28Ka nony nandalo ireo mpandranto Madianita, dia nesoriny sy nakariny hiala tao an-davaka Josefa, dia namidiny roapolo farantsa vola fotsy tamin'ny Ismaelita, ka nentin'ireo nankany Ejipta. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.1510 seconds